सांसद आफ्नो सुविधा बढाउँदै ! - Everest Dainik - News from Nepal
सांसद आफ्नो सुविधा बढाउँदै !
२०७५, ५ असार मंगलवार
काठमाडौं, असार ५ । मर्यादाक्रम विवादका कारण दफावार छलफल रोकिएको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सेवासुविधाबारे निर्णय गर्दै सांसदहरुले आफ्नै सेवासुविधा बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेशसभाबाट पारित भए सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिव र सबै पदाधिकारीलाई गाडी र ईन्धनको सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
याे पनि पढ्नुस फेरि किन गरियो १६ सांसदमा कोरोना परीक्षण ?
प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवासुविधा प्रदेश कानुन् बमोजिम हुने संविधानमा उल्लेख छ ।
सोमबार प्रदेश मामिला समितिले दफावार छलफल टुग्याउँदै प्रदेसभा सदस्यलाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिव व्यवस्था गराउने निर्णय गरेको हो । कान्तिपुरमा खबर छ ।
ट्याग्स: samsad, सांसद
ललितपुरका यी स्थानमा थपिए आज कोरोना संक्रमित